राष्ट्र मक्काउने धमिराको यस्तो रँजाई कहिलेसम्म ? – Gulmiews
२९ भाद्र २०७३, बुधबार ०१:५७ गुल्मिन्युज
सन् १८०६ देखि १८४६ सम्म धेरै जसो क्षेत्रीहरु प्रधानमन्त्री बने । किनकी राजाको आज्ञा पालन गर्ने क्षेत्री भएकाले पनि बढि क्षेत्रीहरु त्यस समय प्रधान्मन्त्री बनेको देखिन्छ । एवं् प्रकारले १८४६ देखि १९५१ सम्म श्री ३ राणाहरुले चलाए । जंगवहादुर राणाले नेपाली शाहहरुले मतुवाली बनाएर, विभिन्न उपनाम दिएर खण्डीकरण गरिरहँदा त्यसलाई नयाँ ढाँचामा रुपान्तरण गरि मंगोललाई फुटालियो । हिन्दूवाद नयाँ मनुस्मृतिको रचना गरेर नेपालका भूमिपुत्र मंगोलहरुको संस्कृति, धर्म, भाषा लोप गराउने, जातिव्यवस्था छुतअछुतको व्यापक विजारोपन भयो । शिक्षावाट वञ्चित गराइए । १९१० मा मुलुकी ऐन वनाई पानी चल्ने र नचल्ने मासिन्या र नमासिन्या भन्ने जस्ता नीतिहरु निर्माण गरिदिए । जुन समाजमा अहिले पनि लागू भएको छ ।
वल्ल राणाहरुको विरुद्ध श्रीपति गुरुङले त्यस्तो निरंकुश शासनको विरोध गरे श्रीपति जंगेको हातबाट टुडिखेलमा तिन ठुन्का हुनु प¥यो । तर त्यो अभियान रोकीएन । लखन थापा मगर जस्ता वीर शहिदको उदय भएता पनि राणाले के टिक्न दिन्थ्यो । राणा फ्याक्न गंगालाल, धर्मभक्त र शुक्रराज शास्त्री नेवार मंगोलहरुले शाहस गरे जंगे शासकले मारिदिए । रामप्रसाद राईले विद्रोह गर्न खोज्दा उनलाई पनि मारि दिए विचरा मंगोल बनाइदिए ।
सन् १९५१ देखि १९६० सम्ममा बाहुनक्षेत्रीले पालै पालो मोज गरे । ९ वर्षको अवधिमा ८ जना प्रधानमन्त्री बने । सबै कोइराला बाहुनको रँजाइ चल्यो । नेपाली कंग्रेस जो सामन्ती बाहुनहरुको पार्टी बन्न पुगेको छ यस समय । १९४६ तिर कंग्रेसको स्थापना भारतमा भएको हो र विपी पनि भारतमा नै जम्मिएका हुन । सन् १९६० मा पञ्चायत लागू भयो र १९९० सम्म ३० वर्ष राज गरे श्री ५, श्री ३ र श्री ६ बाहुन क्षेत्रीहरुले । त्यो अवधिलाई जहाँनिया राणा शासन पछिको सबै भन्दा अध्यारो मानिन्छ । जतिवेला नेपालमा मंगोलहरु माथिको ज्यादति चरम उत्कर्षमा पु¥याइयो । एक धर्म, एक भाषा र एक भेषको नीति लागु गरे । मानव अधिकारको हनन् मात्र भएन मानव अधिकारको वर्खिलापमा बाहुनक्षेत्री श्री ५ राजाले गर्न नहुने सबै खाले काम ग¥यो । नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र घोषणा गरे । यो ज्यादती धेरै लामो समय टिक्न सकेन । १९९० मा बहुदल फर्कियो । पञ्चायतकालमा पनि बाहुन क्षेत्रीहरु नै माथिल्लो ओहोदा रहे । ३० वर्षे अवधिमा १५ जना प्रधानमन्त्री बने त्यहि हुलमा एकजना मरिचमान सिंह श्रेष्ठ वाहेक सबै बाहुन क्षेत्री नै थिए । त्यतिवेला राजालाई विस्णुको अवतार भन्दै जनतालाई पुज्न लगाइयो । तर विष्णु अवतारको अवतारको परिवारमा कहिल्यै नसोचिएको घट्ना घट्न पुग्यो । राजा भएपछि क्षेत्रीहरु बढि विश्वास पात्र हुने हँदा सूर्यवहादुर थापाले ३ पटक, तुल्सी गिरीले ३, कृति निधि विष्टले ३, लोकेन्द्रवहादुर चन्दले २ पटक नगेन्द्र रिजाल २, गेहेन्द्र राज भण्डारी र मरिचमान एक–एक पटक प्रधानमन्त्री पड्काए ।
सन् १९९० पछिको नेपाली राजनीति कम रमाइलो छैन । माओवादीको उदय, दरवार हत्या काण्ड, ज्ञानेन्द्रको ‘कु’, राजतन्त्रको अन्त्य र लोकतन्त्रको स्थापना । सत्तामा चाहि जसो गर्दा पनि बाहुन क्षेत्रीनै थिए । १९ वर्ष अर्थात २००८ सम्मको अवधिमा १४ जना बाहुन क्षेत्रीले पालै पालो सत्ता चलाए ।
२००८ देखि हाल सम्मको अवस्थालाई नियाल्दा सत्ता बाहुनको एक्लौटी भयो । ८ वर्षमा ९ जना प्रधानमन्त्री जनताले देख्ने अहोभाग्य मिल्यो । तर दिगो शान्ति, विकास र संमृद्धि अनि जनताको भाग्य रेखा कोरियन । १९९० देखि अहिलेसम्मको संसदीय अभ्यासलाई गहिरो अध्ययन गरेर ल्याउँदा बाहुनहरुको मोज गर्ने व्यवस्था बनेको छ । २६ वर्षको अवधिमा २४ पटक नेतृत्व परिवर्तन हुनु अत्यन्तै अस्वाभाविक हो । यसले के स्पष्ट छ भने देशलाई बाहुन क्षेत्रीले जतिञ्जेल चलाए पनि विकासको गफ दिए तापनि बन्न सक्दैन । आज पनि गिरिजाको ठाउँमा प्रचण्ड आउँदैछन् । नयाँ नेतृत्व प्रदान गर्न जसले यसअघि ९ महिना सरकार चलाएका थिए । नयाँ सरकारको पनि ९ महिना नटिक्ने निश्चित छ । किन कि सत्ता गठबन्धन कांग्रेसका शेरबहादुर देउवा आफ्ना पालो कुरिरहेका छन् ।
सन् १५५९ देखि २०१६ सम्मको अवधिमा बाहुन क्षेत्री र तिनीहरुको मेरुदण्ड राजतन्त्र अनि मोजतन्त्र बनाएको लोकतन्त्रमा गरेर करिब ४१४ वर्ष सत्तामा रहेका छन् भने ४ वर्ष मात्र मरिचमानसिंह श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री चलाएको इतिहास साक्षी छ । लोकतन्त्र स्थापना भएपछिको समावेशी नारा दिने बाहुन क्षेत्रीको असली व्यवहारलाई संसारले हेरि नै रहेको छ र नेपालका जनताले पनि देखेका छन् । के यो मुलुक बाहुन क्षेत्री र राजाहरुको मात्रै पेवा हो ? यहाँ प्रश्न तेर्सिएको छ । एउटा थपना जस्तो पदमा अल्झ्याएर देशको तालाचावी चाहिँ बाहुन क्षेत्रीको खल्तीमा राख्ने अधिकार मंगोलहरुले दिनु हुन्न भन्ने चेतनाको ढकन खोल्नु जरुरी छ । Comments comments	Comments are closed.